'Caddaalad maysan helin rayid lagu laayay deegaanka Soomaalida Itoobiya' - BBC News Somali
Image caption Wiilkan yarka ah waxaa ka muquda dhaawac. Hay'addu waxay shegetay in hooyadiis iyo ayaydiis ay Liyuu boolis dileen
Hay'adda u dooda xaquuqada aadanaha ee Human Rights Watch ayaa ku eedeysay dowladda Itoobiya inay ku guuldarreysatay la xisaabtanka ciiidammadeeda sida miletariga u tababaran ee Liyuu booliiska loo yaqaanno.
Waxaa lagu eedeeyay inay 21 qof oo rayid ah ku dileen gobolka Soomaalida Itoobiya bishii June ee sanadkii hore.
Dhacdadaasi ayaa waxay ka dhacday tuulada Jaamac Dubad oo ku taalla gobolka Soomaalida Itoobiya.
Human Rights Watch waxay sheegtay in ciidammada gaarka ah ee Liyuu boolis ay billaabeen inay si aan kala sooc lahayn u toogtaan dadka rayidka ah ee tuuladaasi ka dib markii askari Itoobiyaan ah lagu dhaawacay muran dhexmaray isaga iyo ganacsato.
Ciidammada gaarka ah waxay halkaa ku dileen 14 rag ah iyo todoba haween ah, sida ay shegetay hay'adda Human Rights Watch.
Hay'addu waxay intaa ku dartay in dadkii ka badbaaday ay u sheegeen in sagaal bilood ka dib aysan jirin wax baaritaan ah oo la sameeyay islamrakana aan la siinin wax magdhaw ah.
Dowladda Itoobiya wali wax war ah kama soo saarin eedeyantan hadda ka soo yeertay Human Rights Watch, balse Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa horay u beenisay in dad rayid ah lagu laayay deegaanadaasi.